Mutungamiri weMDC, VaChamisa Vanovimbisa Vatsigiri Vavo Kuti Vacharatidzira Nyika Yose
Mbudzi 04, 2018
Mutungamiri weMDC, VaNelson Chamisa.
Mutungamiri weMDC VaNelson Chamisa vaudza zviuru zvevatsigiri vavo kuGwanda, kuMatabeleland South, kuti vagadzirire kupinda mumigwagwa vachiratidzira pamusoro pevhoti yavo yavanoti yakabiwa.
VaChamisa vabatawo nhau dzakasiyanasiyana dzinosanganisira huwori hwavanoti hwawanda munyika, kutambura kuri kuita vanhu munyika uye mari dzemitero dziri kubatirwa vanhu dze 2% tax, iyo yakadzikwa negurukota rezvemari VaMthuli Ncube mwedzi wapera.
Vatiwo bato ravo rakazvipira kuita nhaurirano nehurumende yaVaEmmerson Mnangagwa asi vachiti VaMnangagwa vanofanira kutanga vabvuma kuti bato ravo reZanu PF rakadyiwa bato ravo reMDC musarudzo dzakapfuura.
Murongi wemisangano mubato reMDC, VaAmos Chibaya, vaudza Studio 7 kuti mharidzo yebato ravo ndeyekuti vatsigiri vavo vese vauye nehuwandu hwavo murwendo rwekunobvisa VaMnangagwa kumuzinda weState House vachiisa mutungamiri webato ravo, Va Chamisa panyanga.
Asiwo imwe nhengo yeZanu PF kuMatebeleland South, VaBelieve Gaule, vati MDC iri kutambisa nguva kuramba ichiti yakakunda musarudzo nekuti hurumende iri kutonga yakatambirwa pasi rese, zvichireva kuti hakuna chichashandura zvakabuda musarudzo.
Hurukuro naVaBelieve Gaule